Shiinaha "oo basaasay" Masuuliyiin iyo siyaasiyiin sarsare oo Jarmal ah - BBC News Somali
Shiinaha "oo basaasay" Masuuliyiin iyo siyaasiyiin sarsare oo Jarmal ah
Image caption Sirdoonka Jermalka ayaa sheegay in Shiinuhu uu adeegsaday LinkedIn si uu u bartilmaameedsado 10,000 oo ruux oo Jermal ah
Shiinaha ayaa adeegsanaya ciwaanno LinkedIn oo been abuur ah si uu u arruursado macluumaadka masuuliyiin sarsare oo Jarmal ah iyo siyaasiyiin, sida ay sheegtay hay'adda mukhaabaraadka Jermalka ee magaceeda loo soo gaabiyo BfV.
Hay'adda sirdoonku waxay sheegtay in mukhaabaraadka Shiinuhu ay adeegsadeen barta isku xirka fududaysa iyaga oo bartilmaameedsaday 10,000 oo ruux oo Jermal ah, iyadoo ay macquul tahay in ay u rabeen in ay jawaasiis ahaan u qortaan.
Waxayna baahiyeen ciwaanno been abuur ah oo ay ku eedeeyeen in ujeedadaas loo adeegsanayay.
Hans-Georg Maassen oo ah madaxa hayadda sirdoonka Jalmalk ee BfV ayaa sheegay in ciwaannadani ay muujinayaan dadaalka uu Shiinuhu ku bixinayo in uu waxyeeleeyo u gaysto qaybaha sare ee siyaasadda Jarmalka.
"Tani waa iskuday ballaaran oo ay ku doonayeen in ay galangal ugu yeesahaan baarlamaanka, wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda," ayuu yiri.
Shiinaha ayaa horay u diiday eedaymo noocaas ah oo basaasid, walise kama aysan jawaabin kuwan cusub ee mukhaabaraadka Jarmalka.
BfV waxay daabacday siddeed ciwaan oo ay ku sheegtay kuwa ugu badan ee lagula xiriiro dadka Jarmalka ah ee adeegsada LinkedIn. Waxaa loo ekaysiiyay kuwo soo jiidasho leh oo garab qabta dhallinyarada xirfadleyaasha ah ee Shiinaha kuwaas oo aysan waxba ka jirin.
Image caption Madaxa sirdoonka Jarmalka Hans-Georg Maassen ayaa sheegay in ciwaannadan ay muujinayaan isku day lagu doonayo in saamayn lagu yeesho siyaasadda Jermalka
Ciwaannada waxaa ka mid ah "Allen Liu", oo sheegtay in uu yahay masuulka waaxda shaqaalaysiinta u qaabilsan shirkad latalin dhanka dhaqaalaha ah samaysa iyo "Lily Wu", oo lagu sheegay in uu u shaqeeyo hay'ad cilmi baaris oo bariga Shiinaha ku taalla.
Hay'adda sirdoonka ee BfV waxay sheegtay in labada ciwaanba ay been abuur yihiin.
Hay'addan ayaa si wayn uga walaacsan in sirdoonka Shiinuhu uu habkan u adeegsanayo si uu u shaqaalaysiisto dad darajo sare haya oo jaajuusiin u noqda.
Maxkamadda Iiran oo ayidday xarigga jaajuus Mareykanka u dhashay
Shiinaha oo tarxiilay haweeney “basaas” ahayd
Dadka ay rumaysan yihiin in ciwaannadaas lagu bartilmaameedsaday ayayna ka codsadeen in ay hay'adda sirdoonka Jermalka la soo xiriiraan.
BfV ayaa sannadkii hore sheegtay in ay "ka hortageen weerarro dhanka sirdoon oo dhanka internetka ah" kuwaas oo ay ku jireen isku dayo "si isasoo taraysa loogu doonayay in saamayn lagu yeesho doorashadii baarlamaanka ee bishii Sabtembar.
Waxay sheegeen in burcadda internetka ee loo yaqaanno "Fancy Bear" ama APT28 in ay si gaar ah u firfircoonaayeen ayna rumaysan yihiin in ay hoostagto dawladda Ruushka.